Cameron.....: March 2020
မုန့်ဖုတ်သင်တန်းတက်ထားခဲ့တာ သုံးနှစ်ကျော်နေပြီ ငှက်ပျောသီးကိတ်ကို ဒီလောက်ကောင်းအောင် တစ်ခါမှမဖုတ်ဖူးခဲ့ဘူး....။ လုပ်တိုင်းလည်း မျက်နှာပြင်ခြောက်သွားတာနဲ့ မုန့်သားမပွတာနဲ့ ပျက်စီးပေါင်းများခဲ့ပြီ...။ ခုတခေါက် You tube မှာ moist banana cake လို့ရှာလိုက်တော့ အဆင်ပြေတဲ့ Recipe တစ်ခုတွေ့သွားလို့ လက်တည့်စမ်းလိုက်တာ ဒီတခါ မုန့်က စိုစိုပွပွလေးနဲ့ အချိုအရသာကအစ အကုန်ကွက်တိဖြစ်နေတာတွေ့ရတာ...။ ဒါနဲ့ ဒီ recipe လေးကို မှတ်ထားရတယ်....။ စားကောင်းတယ်ဆိုလို့ တစ်ပတ်ထဲ နှစ်ခါလုပ်လိုက်ရတယ်...။ ပထမတစ်ခေါက်က မုန့်တစ်ခုစာကို နှစ်ခွက်ခွဲလိုက်လို့ မုန့်အသားထု နဲနဲပါးသွားတယ်...။ ဒုတိယတစ်ခါတော့ နှစ်ခုစာအပြည့်လုပ်လိုက်တယ်...။ recipe လေးရေးပေးမယ်နော်....။
၁. ငှက်ပျောသီးမှည့်မှည့် ၂ လုံး
၂. ကိတ်ဂျုံ သို့မဟုတ် အထွေထွေသုံး ဂျုံမှုန့် ၁ခွက်+ စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၃. သံပယိုရည် ၁/၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၄. ဘေကင်ပေါင်ဒါ ၃/၄ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၅. ဘေကင်ဆိုဒါ ၁/၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၆. သစ်ဂျပိုးခေါက်မှုန့် ၁/၄ ဇွန်း (မထည့်လည်းရ)
၇. သကြား ခွက်တစ်ဝက်
၉. သစ်ခွရည် ၃စက်
၁၀. ဟင်းရွက်ဆီ ၆ စားပွဲဇွန်း
၁၁. နို့မလိုင် ၁/၄ ခွက် (ဒိန်ခဲထည့်လည်းရ)
နို့မလိုင်မရှိခဲ့ရင် နို့ ၁/၄ခွက်ထဲကို ဗနီဂါရည် ၁/၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းရောပြီး သုံးလည်းရပါတယ်....။
ပထမဆုံး Oven ကို ၁၇၀ ကြိုတင်အပူပေးထားပါ....။ မုန့်ဖုတ်မယ့်ခွက်တွေက တခါသုံးနဲ့ မကပ်တဲ့ခွက်တွေမရှိရင် ဒန်ခွက်ကိုဆီသုတ်ထားပါ parchment paper ခင်းထားပါ...။ ငှက်ပျောသီးကိုကျေအောင်ချေထားပေးပါ.....။ ဇလုံတစ်ခုထဲ ဂျုံနဲ့ဆိုဒါကို ဇကာစစ်ပြီး မွှေထားပါ...။ ငှက်ပျောသီးကျေသွားရင် သကြား ကြက်ဉ သစ်ခွရည် လီမွန်ရည်ထည့် ရောသမမွှေထားပါ...။ ဆီနဲ့နို့ကိုလည်း ခွက်တစ်ခုထဲရောထားပါ...။ ဇကားစစ်ထားတဲ့ ဂျုံမှုန့်ထဲကို ငှက်ပျောသီးအနှစ်ရည်လောင်းထည့်ပြီးမွှေပေးပါ...။ စီလီကွန်ယောင်းမအပြားနဲ့ Fold လုပ်တဲ့နည်းနဲ့မွှေပေးပါ...။ နောက်ဆုံး ဆီနဲ့နို့ထည့်ပြီး သမရင် မုန့်ဖုတ်ခွက်ထဲလောင်းထည့်ပြီး မီးအပူချိန် ၁၇၀ ဆို အချိန် ၅၅ မိနစ်လောက်ဖုတ်ပါ....။ ကိုယ်သုံးတဲ့ မီးဖိုပေါ်မူတည်ပြီး အပူချိန်အတိုးအလျော့လုပ်လို့ရပါတယ်...။ ကျွန်မ မီးဖိုက ပန်ကာမပါပါဘူး ဒါကြောင့် ၁၇၀ လောက်နဲ့ပဲ အချိန်ကြာကြာနဲ့ဖုတ်တာ မုန့်သားအပွအကျက်ညီပြီး မျက်နှာပြင်လည်း အပူချိန်မများတော့ မခြောက်တော့ဘူး...။ အရမ်းစားကောင်းတာမို့ COVID 19 Self quarantine လုပ်နေတဲ့သူတွေရော Official quarantine လုပ်နေတဲ့သူတွေပါ အိမ်မှာ နေ့ခင်းစာကော်ဖီနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စားလို့ရအောင် စမ်းလုပ်ကြည့်ကြပါလို့....။
1 cup and +2tbs all purpose flour 1 cup and +2tbs
1/4 cup butter milk (Home made butter milk 1/4 cup milk + 1/2 tsp vinegar mix and keep aside 10 mins)
First of all thanks and credit to InspiredLivingWithRahi (from You Tube) and my cousin who pregnant for over5months appetite home bake banana cake. Pre heat oven 170 C and grease the cake pan. Mash ripe bananas and mixed with lemon juice. Sieved all dry ingredients and setaside. In another large bowl beat the egg and sugar together until the color lighten and combine with mash banana. Put the oil and vanilla essence and mix. Then fold the dry ingredient until combine. Do not over mix. Pour in the prepare batter in the pan. Tap2to3times to let off air bubbles. Bake in preheated oven at 170C for 55 mins untilawooden skewer inserted come out clean. Due to your oven you can adjust the temperature and times.
ဒီငှက်ပျောသီးမုန့်လုပ်ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကိုယ်ဝန် ငါးလလောက်ရှိနေတဲ့ ညီမဝမ်းကွဲတစ်ယောက်က ငှက်ပျောကိတ်အာသီသဖြစ်နေလို့ You Tube မှာ Recipe တွေမွှေနှောက်ရှာပြီး လုပ်ပေးလိုက်ရခြင်းပါလို့....။ ရလဒ်ကောင်းကတော့ ကိုယ့်အတွက် ငှက်ပျောသီးကိတ်လုပ်နည်းအသစ်လေးတစ်ခု သိလိုက်ရခြင်းပါ...။
COVID 19 ကာလလေးမှာ လက်မကြာခဏဆေးပေးပါ...။ ကိုယ်ခံအားမကျအောင် အားရှိတဲ့အစားအစာတွေစားပေးပါ...။ လူများတဲ့နေရာတွေရှောင်ကျဉ်ပါ....။ အခုက တီဗီမှာ အွန်လိုင်းမှာ တချိန်လုံး သတိပေးစာတွေ ကြော‌ငြာတွေ ခဏခဏလာနေတော့ အထွေအထူးမမှာတော့ဘူးနော်....။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ လိုက်နာတတ်ဖို့ပါပဲ...။ အားလုံး ကတ်ရောဂါကင်းဝေး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ.....။
Posted by Cameron at 11:49 No comments:
မနေ့ည ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ်မှာ အစိုးရက COVID 19 positive နှစ်ယောက်တွေ့ထားကြောင်း အတည်ပြုကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုး သူ့ထက်ငါလုဝယ်ကြတာ ပစ္စည်းတွေ တော်တော်ပြောင်သွားတယ်ဆိုပဲ...။ ကိုယ်တွေက အဲချိန် အိပ်မက်မက်နေပြီဆိုတော့ မသိလိုက်...။ မနက်မိုးလင်းမှ ချစ်ခင်ရတဲ့ bff တစ်ယောက် ညသန်းခေါင်းကတည်းက ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့ကြောင့်သာသိလိုက်ရတာ..... ကျွန်မကို သတိတရနဲ့ ဂရုတစိုက် သတိပေးတဲ့အတွက် ဒီပို့စ်နဲ့အတူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ဘာဖြစ်လို့ အဲလို တခုခုဖြစ်တိုင်း လူတွေ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်နဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်ထုပ်တွေကိုပဲ အသည်းသန်ဝယ်ကြတယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူး...။ တကယ် Lock down လုပ်လိုက်လို့ လိုအပ်တာက ဆန်နဲ့ အထားခံတဲ့ ကုန်ခြောက်တွေမဟုတ်လား ပြီးတော့ lock down ရင်လည်း အများဆုံး ၁၄ရက်ပေါ့ အဲဒါကို ဘာလို့ တကမ္ဘာစာလောက်ဝယ်နေကြတာတုန်း....။ မရှိတဲ့သူတွေ မဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း စာနာနားလည် ပေးကြပါဉီးလို့....။ ဆေးဆိုင်ဆိုတာ လူတွေတန်းစီနေတာပဲ.... လက်သန့်ဆေး အရက်ပျံ ပိုးသတ်ဆေးရည် mask အဲဒါတွေ ဘာမှမရှိတော့ဘူး....။ လူကြီးတွေအတွက် သောက်နေကျဆေးတွေ မဖြစ်မနေသောက်ရမယ့်ဆေးတွေကိုတော့ ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်...။
လောလောဆယ် ရန်ကုန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Toll Gate မှာ ကားတွေပိတ်နေတယ်တဲ့ သတင်းကြားတယ်...။ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေ အလုပ်ပိတ် လစာကြိုပေး တချို့စက်ရုံတွေလည်းပိတ်ဆိုတော့အဆောင်နေ နယ်သမားတွေက အဆောင်မှာ လူပေါင်းစုံနဲ့ တရုန်းရုန်း ဝင်ထွက်နေတာကို ကြောက်လာကြတယ်...။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတပြောပြလည်း နားမဝင်တဲ့သူကမဝင်ဘူး လက်ဆေးပါဆို မဆေးတဲ့သူရှိတယ်...။ အဲလိုတွေကြေုာင့် ကျွန်မတို့ရုံးက အဆောင်နေသူတချို့ အသံတွေထွက်လာတယ်...။ ရုံးမှာဒီနေ့အဲဒါတွေပဲဖြေရှင်းပေးနေရတာ...။ သူတို့ကို ပိတ်ရက်ရှည်အိမ်မပြန်ခင်မှာ ရုံးမှာ နေစရာတွေထားပေးမယ် ဒီကနေပဲရုံးတက် ဒီကနေပဲ အိမ်ပြန်ရမယ်လို့ စာထုတ်ရတယ်...။ အခု ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာက နိုင်ငံအရပ်ရပ်က ပြန်လာတဲ့သူတွေက အလကားဘာလာပြန်လုပ်တာလဲ မေးချင်တယ် ဟိုမှာ လက်မခံတော့လို့လား လက်ခံသေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်ကြပါ...။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေသယ်လာပြီး ဖြန့်ဖြူးကူးစက်စေတာကတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူး...။ နည်းနည်းကောင်းသွားတာက ပြန်လာတဲ့သူတွေကို ၁၄ရက် စခန်းလေးဖွင့်ထားပေးတဲ့ ပရဟိတသမားတွေကို ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ...။ ပြီးတော ခုချိန်မှာ နယ်မှာနေတဲ့သူတွေ ပိုသတိထားရမှာက ပြည်တော်ပြန်တွေ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာကို တစ်ယောက်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ၁၄ ရက် ကရန်တင်းလုပ်ခိုင်းတာအကောင်းဆုံးနဲ့ safe အဖြစ်ဆုံးပဲ...။
ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဉီးမလဲ ကြိုမသိနိုင်ပေမယ့် ခန့်မှန်းနိုင်နေတာမို့ အရင်ဉီးဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုတစိုက်နေပါ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေထိုင်စားသောက်ပါ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ....။ အတတ်နိုင်ဆုံး အပြင်မထွက်ပါနဲ့ ..အပြင်ထွက်ခဲ့ရင်လည်း ဘာကိုင်ကိုင် လက်ဆေးပါ လက်ဆေးပါ လက်ဆေးပါ....။ လက်ဆေးခြင်းဟာ more effective ဖြစ်ပါတယ်....။ တခုခုဖြစ်လာရင် ခေါင်းအေးအေးထားဆုံးဖြတ်ပါ...။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သုံးပေအကွာမှာ Social distance နေကြပါလို့ မှာချင်ပါတယ်......။
Be Calm Down .... Social Distance , self-quarantine and Stay Safe...
Posted by Cameron at 14:54 No comments:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ COVID 19 က ပျံ့နှံ့နေပြီ....။ မြန်မာပြည်နဲ့ လာအို နှစ်နိုင်ငံမှာပဲမတွေ့သေးဘူးဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်မဖြစ်နိုင်သလို...ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်....။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ဖြစ်ပြီဆို ဘယ်လိုမှ လိမ်လို့ဖွက်ထားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး....။ တကယ်ကူးစက်မယ်ဆို ကျွန်မတို့ဆီမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့လူတွေ ပျားပန်းခတ်သွားလာနေတာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပြီး သေနှုန်းတောင် မြင့်တက်နေလောက်ပြီ...။ ခေတ်ကလည်း မီဒီယာခေတ်ဆိုတော့ တစ်ခုခုဆို လိုင်းပေါ်တန်းရောက်လာမှာပဲ...။
အင်း.... ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတဲ့ အချိန်တော့ရောက်လာပြီ....။ ကိုယ့်မှာသားကောင်မရှိရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သားကောင်ဖြစ်မှာမလွဲပဲနော်....။ ရုံးတချို့ပိတ်နေပြီ.....။ တချို့ရုံးတွေ အိမ်မှာပဲ အွန်လိုင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြပြီ...။ ရှော့ပင်းမောတွေ ဈေးတွေမှာ အပူချိန်တိုင်းတာတာတွေ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းတာတွေဘာတွေလုပ်နေပြီ....။ ခုချိန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်....။ ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်....။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဂရုတစိုက်ရှိဖို့လိုပါတယ်...။ လူများတဲ့နေရာရှောင်... တခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ လောက်လက်ဆေးပါ....။ လက်ဆေးခြင်းက COVID 19 အတွက် အထိရောက်ဆုံးပါပဲ....။ အကောင်းဆုံးက မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရမယ့်လူကလွဲလို့ သက်ကြီးပိုင်းနဲ့ သက်ငယ်တွေကို အိမ်မှာပဲနေပါ အားရှိမယ့်အစားတွေကိုပဲ စားသောက်ပေးပါ...။ ခုခံအားကောင်းအောင် Immune ကောင်းအောင် ဗီတာမင်စီစားပေးပါ...။ ကျွန်မတို့ရုံးကတော့ ၂၀.၃.၂၀၂၀ ကစပြီး ရုံးချိန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ် မနက် ၁၀ ကနေ ညနေ ၄ နာရီထိ အဓိကက ကားကြပ်တဲ့အချိန်ကို ရှောင်လိုက်တာပါပဲ...။ ရုံးကို ငါးမိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ ... I can sleep till 9:30 AM YES!!!!!!!
သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ တစ်မြို့လုံး Lock down လုပ်ပစ်လိုက်တာတို့ ဘာတို့ လုပ်နေပြီ....။ သူများတွေက စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အစိုးရက နှစ်ပတ်စာအစားအစာဝယ်ထား ပိတ်တော့မယ်လို့ကြေငြာလိုက်တာနဲ့....။ တကမ္ဘာစာလောက် အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ဘယ်သူမှမဝယ်ကြဘူး....။ သူ့အချင့်ချိန်နဲ့သူပဲ ဝယ်ကြတယ်...။ အဲဒါလေးတော့ သဘောကျမိတယ်.....။
တွေးမိတာတစ်ခုက ကမ္ဘာကြီးဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးကွာနေကြတဲ့ မိသားစုတွေ မောင်နှမတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေသလားလို့ပါ....။ ခုဆို အိမ်မှာ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ ထမင်းလက်ဆုံစားနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီ....။ အရင်က စကားပြောဖို့အောင် အချိန်မရတဲ့ အဖေနဲ့လည်း စကားကောင်းကောင်းထိုင်ပြောလို့ရပြီ အမေ့ကိုလည်း ဘာလေးစားချင်တယ်ဆိုပြီး တပျော်တပါး ချက်ပြုတ်စားသောက်လို့ရပြီ...။ မောင်နှမသားချင်းတွေလည်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာတွေ အေးအေးဆေးဆေး နွေးနွေးထွေးထွေး တိုင်ပင်လို့ရပြီ...။ ကလေးငယ်လေးတွေရှိတဲ့ မိသားစုလည်း ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုယုယခွင့်ရပြီ....။ အဲလို အဆိုးထဲက အကောင်းလှည့်တွေးကြည့်တာပါ...။
အကယ်၍များ တစ်နေ့နေ့ ဆေးရှာတွေ့သွားခဲ့လို့ COVID 19 ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ဟာဒီတိုင်းလေးပဲ အိန္ဒြေရရလေးရှိနေသေးရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို ခေါင်းမော့ ရင်ကော့လို့ရပြီ...:)
ခုလောလောဆယ်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆေးပါ လက်ဆေးပါ လက်ဆေးပါ လို့ပဲထပ်မှာချင်ပါတယ်...။
ဒီ ဒါနန်းမှာရှိတဲ့ ဟွေ့အမ်းမြို့ဟောင်းလေးကလည်း ကျွန်မတို့သွားမယ့် ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်ပါတယ်....။ တမြို့လုံး ညဖက်ဆို မီးပုံးလေးတွေချိပ်ဆွဲထားလို့ မရောက်ဖူးခင်ကတည်းက မြင်ယောင်ပြီး သိပ်လှမှာပဲလို့ တွေးထားခဲ့မိတယ်....။ တကယ့်အပြင်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတော့လဲ သိပ်လှပါတယ်...။ Tourist Attraction ဖြစ်တဲ့ နေရာလေးပေါ့ သူက လေးထောင့်ကွက်ကျကျလေးတည်ထားတဲ့ မြို့လေးဖြစ်ပြီး ရှေ့ဟောင်း နှစ်ထပ်အိမ်ပုံစံတွေများတယ်....။ ကော်ဖီဆိုင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ မှိုလိုပေါက်....။ ဆိုင်လေးတွေက သေးသေးဟောင်းဟောင်းလေးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးလေးဆယ်လောက်က Scent မျိုးရစေမယ့် ဆိုင်တွေချည်းပဲ....။ အထဲမှာလဲ လူဖြူနိုင်ငံခြားသားတွေက အပြည့်....။ နောက်ပြီး သရေလုပ်ငန်းကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြတယ်.....။ သရေဖိနပ်တွေ ခါးပတ်တွေ အိတ်မျိုးစုံတွေ....။
ဂိုက်က ကျွန်မတို့ကို ညစာမစားခင် ဒီမြို့ဟောင်းကိုအရင်ပို့ပေးတာ ဘာတဲ့ မြို့ထဲကိုကားကြီးနဲ့ပေးမဝင်လို့ ကျွန်မတို့ လူအယောက်သုံးဆယ်ကျော် တုတ်တုတ်ကားလေးတွေထပ်စီးရတယ်...။ ဂိုက်ကကျွန်မတို့က စုရပ်နေရာလေးပြထားပြီး ဘယ်အချိန်ဒီနားမှာပြန်ဆုံမယ်လို့မှာထားတယ်....။ အဲဒီမှာ မီးပုံးတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကိုစဝင်ပြီး လျှောက်ကြည့်ကြတာ သိပ်မကြာဘူး... ကုတ်နဲ့စတိုင်လ်ဘောင်းဘီအနက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ အသက်၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကျွန်မတို့အဖွဲ့ရှမ်းလိုစကားပြောနေတာကိုကြားသွားပြီး ဘယ်ကလာတာလဲ ထိုင်းလင်းကလား Tour နဲ့လာတာလားဆိုပြီး စစ်လားဆေးလားလာလုပ်တယ်...။ လက်ထဲမှာလဲ ဝေါကီတောကီတစ်လုံးကိုင်ထားသေးတယ်...။ ကျွန်မက မဟုတ်ဘူး ငါတို့က မြန်မာတွေလို့ပြောတော့ ခဏဒီနားစောင့်နေ သူပြန်လာမယ်ဆိုပြီး လမ်းတစ်ခုထဲသုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ ချိုးဝင်သွားတယ်...။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့တင်မကဘဲ ကျန်တဲ့သူတွေကိုပါ အဲလိုတွေလိုက်ရစ်တယ်...။ သူတို့ မြို့ဟောင်းဝင်ကြေးကောက်ချင်တာလားဘာလားတော့မသိဘူး ကောက်ချင်တယ်ဆို ဟိုမှာ ဘိုတွေ အဖြူကောင်တေအများကြီးသူတို့ကျသွားမရစ်ဘဲ ကိုယ့် အာရှတိုက်သားအချင်းချင်းလာအနိုင်ကျင့်ချင်နေတာ....။ ခြိမ်းလားခြောက်လားလာမလုပ်နဲ့လေ... တရားဝင်ကောက်ချင်တယ်ဆို အဝင်ဝမှာကတည်းက လာသမျှလူတွေကို အကုန်ကောက်လေ....။ မီးပုံးအလှလေး မြို့အလှလေးတောင် သေချာမခံစားလိုက်ရဘူး စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ဆက်မကြည့်တော့ဘဲ ပြန်ထွက်လာလိုက်ကြတယ်....။
အဲမှာ လူတွေမစုံ လူစုကွဲ တစ်ယောက်ကျန်ခဲ့လို့ လိုက်ရှာရတာနဲ့ ညစာတောင် တော်တော်နောက်ကျသွားတယ်....။ ညစာဟင်းပွဲတွေမရိုက်လိုက်မိ...အဲညက ငှက်ကုလားအုပ်သားကို Stir Fried ပုံစံလေး ငရုတ်ပွအစိမ်းနဲ့ကြော်ထားတာပါတယ် အဲဒါကို ငှက်သားမှန်းမသိ အမဲသားထင်ပြီး စားကြတာ ကျွန်မကအမဲသားမစားတော့ မမိလိုက်..အမဲသားစားတဲ့သူတွေလည်း ငှက်ကုလားအုပ်သားမှန်းသိတော့ ထိတောင်မထိကြတော့ဘူး...။
ဟွေ့အမ်းမြို့လေးအကြောင်းနည်းနည်းသိတာပြောပြမယ်...။ ဂိုက်က အဲလောက်စုံအောင်မရှင်းပြတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှာဖတ်...။ ဟွေ့အမ်းမြို့ဆိုတာ ၁၆ရာစုလောက်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရှေးဟောင်းဂျပန်တံတား ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေ ရိုးရာကစားနည်းလေးတွေ ရှေးဟောင်းအိမ် ဝါဝါလေးတွေနဲ့ အဝါရောင်လွှမ်းနေတဲ့ လမ်းမထက်မှာ ရိုးရာမီးပုံးအလှလေးတွေနဲ့ မြင်ကွင်းတွေက မရိုးနိုင်အောင် ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့်လည်း Yellow City of Vietnam လို့ တင်စား ခေါ်ကြတာလို့ထင်ပါတယ်...။ ဟိုးအရင် ၁၈ရာစုလောက်က ကုန်သွယ်ခဲ့တဲ့ အချက်အချာ နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရတယ်...။ ဟွေ့အမ်းမှာ မီးပုံးလေးတွေ မျှောရင်း လှေလေးတွေစီးရင် ညအလှကို ခံစားနိုင်သေးတာကြောင့် ဓါတ်ပုံတွေလည်းရိုက်မဆုံးတဲ့ နေရာလေးပေါ့....။ ကိုယ်တွေကသာ ကယက်ထသွားလို့ အဲဒါတွေသိပ်မခံစားလိုက်ရတာ...။
ဟွေ့အမ်းလိုနေရာမျိုးက အဖွဲ့လိုက်ထက် ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်လည်ဖို့ပဲကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ....။
ဘာမုန့်လဲတော့မသိ ရေးထားတာတော့ အုန်းသီး အာလူး ပဲ နဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေပါတယ်...
Credit to MMHK
ဒါနန်းမြို့လည်က ဟန်မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ နဂါးတံတား (Credit to MMHK)
ညစာစားပြီး ကျွန်မတို့တည်းတဲ့ Kay Danan Hotel နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ ညဈေးမှာတချို့နေခဲ့ ဈေးမဝယ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဟိုတယ်ပြန်ကြတယ်....။ ညဈေးဆိုတာကလည်း ဘာမှသိပ်မရှိ ကျွန်မတို့ဆီက ဘုရားပွဲက ပစ္စည်းတွေသာသာပဲ... ဟိုချီမင်းနဲ့အဲဒါတွေကွာတယ်...။ ဒါးလက်ညဈေးဆိုတာ ဘရင်းအတုတွေမျိုးစုံရသလို စားစရာတွေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတကယ်အများကြီး...။ ဒါနဲ့ ဘာမှမရခဲ့ဘဲ ဟိုတယ်ကိုလမ်းလျှောက်အပြန်မှာ မီနီမတ်လေးတစ်ခုတွေ့လို့ စားစရာလေးနဲနဲပါးပါးဝယ်ဖြစ်လိုက်တယ်... ဒီနဂါးတံတားကမ်းနားဖက်မှာ ဆိုင်လေးတွေမိုက်တယ် ထိုင်ရအောင်လို့ စိတ်ကူးပြီး လမ်းကူးလိုက်တော့မှ ရေပုတ်နံတွေမခံနိုင်လို့ နောက်ဆုံး ဟိုတယ်ပဲပြန်လိုက်ကြရတယ်...။
နောက်ဆုံးနေ့ ရန်ကုန်ပြန်ရမယ့်နေ့ ဟနွိုင်းမှာလေယာဉ်စီးဖို့ ဒါနန်းလေဆိပ်မသွားခင် ဒီဘုရားကိုပို့ပေးတယ်
ထုံးစံအတိုင်း ဒါနန်းလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်က ကိုယ်စီးရမယ့်အချိန် cancel ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချိန်ကို ရန်ကုန်ပြန်မယ့်လေယာဉ်ပြန်မီဖို့ လုပ်ရသေးတာ ဂိုက်ကတော့ အသက်ရှူချိန်တောင်မရလိုက်ဘူး တစ်ယောက်ထဲ ယောက်ယက်ခတ်နေတာ....။ ဂိုက်ကို အနည်းဆုံး နှစ်ယောက်လောက်ထည့်ပေးသင့်တယ်....။ လူ၃၃ယောက်အတွက် ဂိုက်တစ်ယောက်ထဲက မနိုင်ပါဘူး...။ ကျွန်မတို့အရင်တစ်ခေါက် ဟိုချီမင်းသွားတုန်းက ခရီးသည် ၂၈ယောက်ကို မြန်မာဂိုက်နှစ်ယောက်အပြင် ဗီယက်နမ်ဂိုက်ကလည်းခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးလိုက်ပေးသေးတယ်...။
ပြန်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတာကလည်း လေယာဉ်နှစ်ဆင့်စီးတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်တာပါပဲ...။ လေးညအိပ်ငါးရက်ဆိုတာ တကယ်လည်ရမယ့်နေ့က သုံးရက်ထဲရယ်....။ ဆိုတော့ အကြံပေးချင်တာက ဗီယက်နမ်ကို Tour နဲ့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ လေယာဉ်လက်မှတ် ဟိုတယ်စီစဉ်ပြီး ကိုယ်လည်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုပဲ သူတိုဂိုက်နဲ့လည်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့....။ အထူးသဖြင့် ဒါနန်းနဲ့ ဘာနာဟေးလ်လိုနေရာမျိုးက ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ်က အကောင်းဆုံးပါပဲ...။ ဒါကတော့ ဒီတစ်ခေါက်ခရီးသွားလို့ ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲကပေါ့...။
လောလောဆယ် ကမ္ဘာကတ်ရောဂါအဆင့်အဖြစ်‌ WHO ကကြေငြာထားတဲ့ COVID 19 ကို ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံး မပေါ့ဆကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် ....။ နာဂစ်တုန်းကလည်း မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုတာကြေငြာရက်နဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့နေခဲ့ကြလို့ သေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပဲ သင်ခန်းစာအနေနဲ့ရခဲ့ကြပြီးပြီ...။ အခု COVID 19 ကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာနော် မတွေ့သေးတာဆိုလို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုပဲကျန်တော့တာ...။ ဘယ်လိုတွေ ကပ်လွှတ်နေသလဲတော့ မပြောတတ်ဘူး...။ ဘုရားတရားမြဲလို့လို့ပဲမှတ်ပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစစအရာရာသတိထားကြပါ... တခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ...။ ရေမရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်တောင် Hand Sanitizer သုံးပါ...။ လောလောဆယ် ဆိုင်တွေမှာ ပစ္စည်းပြတ်နေတယ်ကြားတယ်....။ အနည်းဆုံး အရက်ပျံပုလင်းတော့ဆောင်ထားပါ ...။ အိတ်ထဲမှာ Alcohol pad ဆောင်ပြီး သုတ်ပေးလည်းရပါတယ်....။ Safe yourself... Safe the World...
Ba Na Hill ကဝယ်ခဲ့တဲ့ Vietnam Phin ကော်ဖီစစ်ခွက်လေးဝယ်ခဲ့သေးတာ ပြဖို့မေ့သွားလို့ ပြန်လာတင်
Posted by Cameron at 15:25 1 comment:
ခရီးစဉ်အရ day4တကယ်တမ်း လည်ရတဲ့နေ့အရတော့ တတိယနေ့ ဟနွိုင်းကနေ ည ဆယ့်တစ်နာရီကျော်မှ လေယာဉ်စီးပြီး ဒါနန်းကိုသွားရတာ တစ်နာရီခွဲကျော်မှရောက်တော့ ဟိုတယ်ကိုကားထပ်စီး ဟိုတယ်ရောက် Check In ဝင်ပြီး ဝူဟန်အတွက် ဖျားနာသလား‌ဘာလား အတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက် စာရွက်ဖြည့်ရသေးတယ် ရေမိုးချိုးပြီး အိပ်ယာဝင်တော့ မနက်သုံးနာရီထိုးနေပြီ....။ မနက်ကျ ၇နာရီကို မနက်စာစား ရှစ်နာရီထိုးတာနဲ့ ကားနဲ့ Ba Na Hill ကိုတက်ဖို့ တောင်ခြေကို တစ်နာရီလောက်မောင်းရတယ်....။ Ba Na Hill ဆိုတာ တချိန်က ငှက်ပျောတောကြီး ငှက်ပျောပင်တွေတစ်တောင်လုံးပေါက်လို့ Banana Hill လို့ခေါ်တာ ခုတော့ banana ကနေ Ba Na hill ဖြစ်သွားတာ....။
ဒါနန်းမှာ ကျွန်မတို့တည်းတဲ့ Kay Da Nang Hotel ကမနက်စာ
ဗီယက်နမ်မှာ ဟိုတယ်မနက်စာကျွေးတဲ့ထဲ Ham ကတော့ Xo...Xooo Good ပဲ
Salad နဲ့ France Baguette နဲ့ဆိုတော့ ပြည့်စုံပြီလေ
ဓါတ်လုံးက အားလုံးလေးလိုင်းရှိတယ် တစ်ခုကို ဆယ့်တစ်ယောက်ဆန့်တယ်
ရာသီဉတုသာယာနေရင်တွေ့နိုင်မယ့် လှပသာယာသော ရွှေလက်တံတား (ဂူဂယ်ကပြန်ယူထားတာ)
ကိုယ်တွေရောက်တော့ အဲလို မြူနှင်းတွေပိတ်ကာစီးနေတဲ့ ရွှေလက်တံတား
ဓါတ်လုံးစီးပြီး တောင်ပေါ်မရောက်ခင် လမ်းတစ်ဝက်မှာရှိတဲ့ ရွှေလက်တံတားနဲ့ ထိုင်တော်မူဘုရားဆီအရင်ရောက်ပါတယ်....။ ရွှေလက်တံတားပေါ်ဖြတ်ပြီး ကျူးလစ်ပန်းတွေ မျိုးစုံနေအောင်စိုက်ထားတဲ့ ပန်းခင်းတွေရှိတဲ့ ပန်းခြံထဲ လျှောက်လည် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပေါ့....။
နှမ်းကပ်မုန့်လုံးကြီးကြော် ဂိုက်က တောင်ပေါ်ကျ အမျိုးပေါင်း ၈၀ကျော်ပါတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် ဘူဖေးကျွေးမယ်ဆိုတော့ ထမင်းမစားနိုင်မှာစိုးလို့ ဒီမုန့်ကို ဝယ်မစားလိုက်ဘူး
ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ကြတာကတော့ အရှေ့တိုင်းသားတွေပဲ
အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ အကြောက်အရွံ့မရှိ ဘာမှမကာကွယ်ကြ
ခုတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများကို ပျံ့နေပြီ လက်ခဏခဏဆေးပေးကြပါလို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေနော်
ဒီလိုပန်းပွင့်လှလှတွေ ရှုခင်းလှလှတွေတွေ့ရင် ကျွန်မရဲ့ဓါတ်ပုံဆရာကို သိပ်သတိရတာပဲ
ပြီးတော့ ခုချိန်ထိ တိုးတက်မလာသေးတဲ့ ကိုယ့်ရိုက်ချက်ကို ကိုယ်အားမလိုအားမရတွေဖြစ်
တရုတ်လိုရွှေကြွက်နှစ်ဆိုတော့ နေရာတိုင်းမှာ ချစ်စရာကြွက်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ဗီယက်နမ်တွေဟာ တရုတ်ကို မုန်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ အကုန်နီးပါးက တရုတ်လိုပဲ နှစ်သစ်ကူးတာ လကန်တော့တာကအစ
ကျွန်မတို့ကို International Buffet ကျွေးတဲ့ဆိုင်လေး
မိချောင်းပေါက်အသားတောင်ပါသေးတယ် အဲနေ့က ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့မေ့
ကိုးရီးယားက အိုပါးတွေအများဆုံး လာလည်ကြတယ်
အရှည်ဆုံး ကိုယ်ဘာသာကိုမောင်းရတဲ့ Coaster စီးချင်တာ နှင်းတွေအရမ်းကျနေလို့ ပိတ်ထားတယ်
နှင်းမှုန်တွေအောက်မှာ Starbucks က ကာဖီတစ်ခွက်နဲ့ (Credit to MMHK)
ဒီပုံလေးကိုရိုက်ပေးတဲ့ MMHK ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....။ ဒီခရီးစဉ်မှာ သူများကိုပဲ ကိုယ်ကရိုက်ပေးတာများတယ်....။ ကိုယ်တိုင်ဓါတ်ပုံရိုက်ခံရတာ အသက်ကြီးလာတော့ ယုံကြည်မှုနည်းလာတယ်....။ ကိုယ်တိုင် ပဲထုတ်ပြီး အရိုက်ခံဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပေမယ် MMHK က အနောက်က ရဲတိုက်နဲ့မိုက်တယ် အစ်မရိုက်ပါလား ကျွန်တော်ရိုက်ပေးမယ်လို့ အရင်ပြောလို့...။ တကယ်က အဲကောင်လေး သူ့ပြန်ရိုက်ပေးဖို့ ကိုယ့်အရင်ကမ်းလှမ်းတာ....။ EDM ခေတ်ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်က အစ်မဆိုတော့လဲ အစ်မပေါ့ Lol !!!
အစက စတားဘာ့ကော်ဖီခွက်လေးလှရင်ဝယ်မလို့ပဲ ဒီဇိုင်းမကြိုက်လို့မဝယ်ဖြစ်လိုက်ပါ
တောင်ပေါ် ပြင်သစ်ရွာလေးတွေမှာ စားစရာဆိုင်အစုံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်အစုံပဲ
ဒီစက်ရုပ်ထဲမှာ လူရှိတယ် အရမ်းမိုက်တယ် သူနဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့သူအများဆုံး
ကလေးတွေဆို သိပ်ကြိုက်ကြတာ သူ့အနားကမခွာချင်
ဒီပုံက သူ့ကိုလှမ်းရိုက်တော့ ကိုယ့်ဆီ လမ်းလျှောက်လာနေတာ
မနှစ်က Tango နဲ့ ချင်းတောင် ခေါနူးဆုမ် သွားတာ မတွေ့လိုက်ရတဲ့ တိမ်ပင်လယ်
ဂူဂယ်လ်က ပြန်ယူကြည့်တာ ဗီယက်နမ်တွေက သူတို့ကိုလာတိုက်တဲ့ ပြင်သစ်ကို မုန်းလို့ အဲတုန်းက ဒီတောင်ပေါ်မှာ ပြင်သစ်တွေဆောက်ခဲ့တဲ့ နားနေစခန်းကို အကုန်မီးရှို့ဖျက်စီးပစ်လိုက်ပြီး ခုမှ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်အဲပုံစံတွေပြန်ဆောက် မပြီးသေးတဲ့ ဆောက်လက်စအဆောက်အအုံတွေလည်း အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်....။
ဒါနန်းကို ရန်ကုန်နဲ့ဒါရိုက်လေယာဉ်ရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိ....။ နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်သွား Ba Na Hill မှာပဲတည်းပြီး နှစ်ည သုံးညလောက်စိတ်ရှိလက်ရှိ လည်ချင်သေးတယ်လေ...။ tour နဲ့သွားတာက အချိန်နဲ့သွား အချိန်နဲ့စားတော့ သိပ်မအေးဆေးဘူး ....။ ဗီယက်နမ်ဆို ဒါနန်းနဲ့ ဒါးလက်မြို့ကိုတော့ သိပ်ကြိုက်တယ်...။
ခုနောက်ပိုင်း ခရီးသွားပို့စ်တွေရေးရမှာ သိပ်ပျင်းနေသလိုပဲ အလုပ်များနေတာလဲပါပါတယ်....။ ဟိုရက်ပိုင်းကမှ လိုင်းပေါ်မှာ ကဗျာဆရာနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်း ဗီယက်နမ်သွားလည်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာကို ပြောပြမိတော့ သူက ပို့စ်တင်ထားတာမတွေ့ပါဘူးတဲ့... ရေးမှမရေးရသေးတာလေလို့....။ ပုံတွေရွေးရတာနဲ့ ကျွန်မရဲ့မလှမပလက်ရာတွေကို တင်ပေးရမှာလည်း အားနာလို့ပါ....။ ဒါနဲ့ အားနာနာနဲ့ပဲ အများကြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Cameron at 10:40 1 comment: